भन्सार नियमावली २०६४ का अनुसार अब विदेशबाट फर्किने नेपालीहरुले २५० ग्राम सम्मका सुनका गहना ल्याउन पाउने भएका छन्। सरकारले सर्बसाधारणका लागि निजी झिटीगुण्टा करमा केही हेरफर गरेको छ। यसै निजी झिटीगुण्टा कानुन अन्तर्गत विदेशबाट नेपाल फर्किँदा नेपालीले २ सय ५० ग्रामसम्मका सुनका गहना ल्याउन पाउने भएका हुन् । त्यस्तै गरि विदेशबाट फर्कदा नेपालीहरुले काँचो सुन १ सय ग्रामसम्म ल्याउन पाउने भएको छ।
नया व्यवस्था अनुसार ५० ग्रामसम्म सुनका गहना ल्याउँदा भन्सार लाग्ने छैन तर थप १ सय ग्राम गहना ल्याउँदा भने प्रत्येक १० ग्रामको लागि ७ हजार २ सय रुपैयाँ भन्सार तिर्नुपर्नेछ र त्यसपछिको बाँकी एक सय ग्रामको ९ हजार रुपैयाँ भन्सार तिर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी विदेशबाट फर्कने नेपालीहरुले १ सय ग्रामसम्म काचो सुन ल्याउन पाउने छ । ५० ग्राम मात्र काँचो सुन ल्याउदा प्रति १० ग्रामको ६ हजार २ सय रुपैयाँ भन्सार तिर्नुपर्नेछ भने बाँकी ५० ग्रामको प्रति १० ग्रामको ७ हजार २ सय रुपैयाँ भन्सार सुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
विदेशीले नेपालमा सुनका गहना भित्र्याउँदा भने गहनाको कुल लागतको २० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयले कुनै ब्यक्तिले गहना लगाएर आउँछ र लगाएर नै फर्कन्छ भने ५० ग्राम भन्दा बढी पहिरिएको अवस्थामा गहनाको कुल लागतको २० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । उक्त गहना फिर्ता गर्ने शर्तमा मात्रै भित्र्याउन मिल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । फिर्ता लैजाँदा धरौटी फिर्ता हुने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
तर कुनै ब्यक्तिले सुनका गहना लगाएर आउँछ र लगाएर नै फर्कन्छ कुल लागतको २० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ। ५० ग्राम भन्दा बढी सुनका गहना लगाएको अवस्थामा गहनाको कुल लागतको २० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ। र गहना फिर्ता लैजाँदा राखिएको धरौटी समेत फिर्ता हुने विधेयकमा उल्लेख छ। तर तोकिएभन्दा बढी सुनका गहना ल्याएको खण्डमा ऐन अनुसार कारबाही तथा जरिवाना हुने जनाइएको छ।
फ्रेण्डलिष्ट हाइड गरेको अरुको फेसबुकको फ्रेन्ड यसरि हेर्न सकिन्छ
एनसेलको ‘सही’ डेटा प्याक, दैनिक १ घण्टा निःशुल्क भिडियो स्ट्रीमिङ्ग
आठ लाखमा पोखरामै बनाए एक नेपालीले हेलिकप्टर ( हेर्नुस भिडियो)
बुटवलका यी दाजुभाईको चमत्कार : नेपाली भाषा बुझ्ने र नेपालीमै जवाफ फर्काउने रोवर्ट बनाए
आउदो हप्ता यस्तो छ मौसमको जानकारी , देशको विभिन्न भागमा भारि बर्षको सम्भावना
इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि गर्ने तयारी, २० प्रतिशत सम्म बढ्न सक्ने
Previous Article म्यानपावर व्यवसायीहरु आन्दोलित , विदेशिने कामदारको टिकट काट्न छोड्यो
Next Article सिंगापुरले माग्यो नेपाली कामदार ! हेर्नुस कति छ लागत ? कति हुन्छ तलब